Furista Xisbiyada 2 qolo ayaa dabada ka riixaysa….Wasiirkii Hore | Qaran News
Furista Xisbiyada 2 qolo ayaa dabada ka riixaysa….Wasiirkii Hore
Writen by Qaran News | 10:39 am 1st Dec, 2021
Furista Xisbiyada 2 qolo ayaa dabada ka riixaysa.
1. Kulmiyaha Debed wareega ah.
2. Wadaniga Debed wareega ah.
Anigu Waxaan qabaa M.wayne Muuse labadan qolo midna u danaynayn ee ay doonayaan in ay helaan Janis ay iyagu xisbiyo ku furtaan.
Maba xuma oo waa rag tashaday lakiin Madaxwaynuhu hada waxa uu haystaa Sumcad wayn oo ah in uu Qabtay doorashooyin isku sidkan oo wiliba ah kuwii abid ugu fiicnaa ee aan dawladu farafarayn.
Hadaba waxaan qabaa M.waynuhu in uu Sumacad wayn ku helayo in uu qabto doorashada Madaxtooyada, oo aan qabo in uu ku guulaysanayo haduu la yimaado qorshe u horseedi kara Guusha.
Hadiise uu qaban waayo oo isyidhaahdo ururada fur, waxa dhacaysa in korodhsiimo timaado, Guurtidu korodhsato, qabiil waliba xisbi furto , qalaase siyaasadeed oo dib inoo celiyaa yimaado.
Xisbig xaakimkiina uu noqdo mid halkaa ku baaba ah oo kadib la naço xisbiga iyo xukuumadaba.
Waxaan aad ula yaabay siyaasiyiin xisbiga Kulmiye ka tirsan ayaa aaminsan in xisbigu aanu guulaysanayn hadii uu doorasho galo , waxaan aad ula yabay quusta ay muujinayaan iyo ceebta ay xisbiga u soo duwayaan.
Had iyo jeer 25% dadka codeeya waxa ay markasta gacanta ugu jiraan xukuumada, waxa keliya ee uu kula tartamayaa 2da xisbine ee soo hadhay waa 75% soo hadhay.
Waa maxay baqdintan soo foodsartay iyo majara habaabintan xisbigii ku habsatay.
Anigu waxaan qabaa in gelinka hore Muuse Bixinku guulaysanayo hadii uu doorasha ku dhiirado .
Hadii kale wadanku dib ayuu u noqonayaa oo walahi in aynu odhon doono waar yaa harageedi inagaga celiya.
Waxan qabaa in tageerayashi joogan hadii Madaxwaynuhu dadkeedi u xulo .
Xaga xeerka qolooyinka ka hadlaya waxa jira ,mar hadii uu ku soo beegmo xili doorasho xaq ayuu u leeyahay M.waynuhu in uu qato go,aan ah in dib xisbiyada loo dhigo, ilayn DASTUUR lama jebine waxu waa xeere.
Waxa qoray Wasiirkii hore ee Ganacsiga Cumar Shucayb